March 14, 2020 - Myitter
UK ရဲ့နာမည်ကြီး သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ပါလာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း….
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော UK ရဲ့ နံမည်ကြီးသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ March3ရက်နေ့ထုတ် The Sun… သတင်းစာမှာတောင် ကမ္ဘာပေါ်ကအားလပ်ရက်ခရီးသွားမယ့်သူတွေအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်နိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာတစ်ချို့သူတွေက မြန်မာအစိုးရကများ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတင်းအမှောင်ချထားလား ၊ ဖုံးဖိထားသလားဆိုပြီး သံသယ ရှိနေကြပါတယ်..။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်းငါးဆယ်ကျော် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ် […]
မတ် ၂၁ တွင် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားသို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် အဲယားကွန်းပါလေအိတ် မီးရထားသစ်ဖြင့် စတင်ပြေးဆွဲပေးမည် ….
မတ် ၂၁ တွင် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားသို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်အဲယားကွန်းပါလေအိတ် မီးရထားသစ်ဖြင့် စတင်ပြေးဆွဲပေးမည် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားမီးရထားလမ်းပိုင်းအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်အဲယားကွန်းပါလေအိတ် ရထားသစ်ကြီးကို(၂၁.၃.၂၀၂၀) ရက်မှစပြေးဆွဲ‌ပေး‌တော့မည်ဖြစ်‌ကြောင်းမြန်မာ့မီးရထားမှအတည်ပြုပြောကြားပါသည်။ မြန်မာ့မီးရထားဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူးနှင့်မြန်မာ့မီးရထားမှအထွေထွေမန်နေဂျာများပါဝင်သောအဖွဲ့သည် (၁၄-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ကမန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းတွင်အသစ်ပြေးဆွဲပေးတော့မည့်အမှတ်-၃၁အဆန်/၃၂အစုန်ရထားအခြေအနေအားပဏာမစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုခရီးစဉ်အတွက်အထက်တန်း-၁တွဲ/စားသောက်တွဲ-၁တွဲ ရိုးရိုးတန်း(ဘရိတ်)-၁တွဲဖြင့်မန္တလေး မှ ရွှေဘိုဘူတာအထိစမ်းသပ်ပြေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်(၃၁)အဆန်သည် မန္တလေးမှနေ့လည်(၁)နာရီတွင်ထွက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကန့်ဘလူသို့ ညနေ(၅)နာရီ ၃၁ မိနစ်တွင်ဆိုက်ရောက်ပြီးညနေ(၅)နာရီ၃၄မိနစ်တွင်ထွက်ခွါပေးပါမည်။မြစ်ကြီးနားသို့နောက်တစ်နေ့ နံနက် (၇)နာရီတွင်ဆိုက်ရောက်ပါမည်။ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစည်းအဝေးမှ ညွှန်ကြားသော အချက်များ ….
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစည်းအဝေးမှ ညွှန်ကြားသော အချက်များ… – သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ မပြုလုပ်။ လူစုလူဝေးများ ရှောင်ကျဉ်မည်။ ရိုးရာသင်္ကြန်ပုံစံအတိုင်း မိမိ အိမ်လမ်းများမှသာ ပက်ကြမည်။ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်များ အပါအဝင် ကိစ္စများအတွက် သင်္ကြန်အစည်းအဝေးထပ်ခေါ်မည်။ စည်ပင်က ဦးဆောင်လုပ်ရမည်။ – လေဆိပ်တွင် ပိုတင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးမည်။ အသုံးပြုပီး ပစ္စည်းများ […]
မြန်မာပြည် က ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် စိုးရိမ်နေ သူများအတွက် သတင်းကောင်းလေး တစ်ခု ….
ခိုင် မာစိတ်ချရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေက ဖော်ပြနေတာက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမှန်တကယ် သေဆုံးနိုင်သူအရေအတွက် နည်းပါးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ ​ရောဂါဖြစ်သူရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို အံတုနိုင်ပြီး၊ သေဆုံးသူတွေဟာ ရောဂါအခံရှိသူ၊ အသက်အရွယ်ကြီးလို့ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူတွေသာဖြစ်တယ်။ သာမန်လူတွေအတွက်တော့ ကူးစက်ခံရရင်တောင် အရမ်းစိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။​ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူအားမွေးလိုက်ရင် အိမ်မှာနေရင်း ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ […]
ကပ်ရောဂါများမှ အထူးကင်းဝေစေရန် အတွက် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းမှ သံဃာတထောင်ကျော် ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်
ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ ကပ်ရောဂါများမှ အထူးကင်းဝေးစေရန် အမရပူမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတစ်ထောင်ကျော်၏ သီလအား သမာဓိအား ပညာအားတို့ စုပေါင်းကာ (၄) ရက်တိုင်တိုင် ညနေ (၆) နာရီ တိတိအချိန်တွင်နိူင်ငံတော်ဩဝါစရိယ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂရု မဟာနာယကချုပ် ဆရာတော်ကြီး အရှင်ဣန္ဒောဘာသာဘိဝံသ ဦးဆောင် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါသည်။ […]
စပွန်ဆာ မရှိတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင် ( သို့မ ဟုတ် ) (၁)ကျမ်းကို (၇၀၀ဝိ) …..
စပွန်ဆာ မရှိတဲ့ဘွဲ့နှင်းသဘင် ပိုးထည်တိုက်တွေက အလု့အယက်စပွန်ဆာမပေးတောင် သင်္ကန်းတိုက်တွေကပေးသင့်သည်။အောင်ပွဲကခက်ခဲသည်။ (၁၀)နှစ်မကကြာသွားတတ်သည် ။ လက်မှိုင်ချရသူတွေကမနည်း။ခုတော့ ကြည့်စမ်း(၁)ကျမ်းကို (၇၀၀ဝိ) (၃)ကျမ်း (၂၁၀၀၀)လမ်းစာရိတ်မှလောက်ရဲ့လား? စာသင်သား အခွင့်ရေးဘာမှမရှိမေ့ရက်နိုင်လွန်းတာ အံ့ဩစရာ။အချင်းချင်းက မမြှောက်စားအရေးထား အဆိုမရှိ။အကယ်ဒမီပေးပွဲလောက်မှ စိတ်မဝင်းစား။ သုဓမ္မသိင်္ဂီပွဲတက်မိတ်ကပ်ဖိုးလောက်တောင်မရှိ။သာသနာရောင်ဝါလင်းစေဖို့ အပင်းစို့နေတာကဝမ်းနည်းစရာ။ အမျိုးဘာသာ သာနာရဲ့ ကြွေးကြော်သံအောက်မှာ စာသင်သားတွေဘဝ ဟဟပဲပေးခံနေရတယ်။ […]
ဝူဟန်မြို့တွင် ကျန်ရှိခဲ့သော မြန်မာပညာသင် ကျောင်းသား ၂ ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိ …..
ဝူဟန်မြို့တွင် ကျန်ရှိခဲ့သော မြန်မာပညာသင် ကျောင်းသား ၂ ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် ကျန်ရှိခဲ့ သော မြန်မာပညာသင် ကျောင်းသား ၂ ဦးမှာ ယနေ့ (မတ် ၁၄) ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 2019 Novel […]
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အစောင့်ကျ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ရိုက်နှက် ဆိုင်ကယ်လုယူခံရ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အစောင့်ကျ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ရိုက်နှက် ဆိုင်ကယ်လုယူခံရ ကန့်ဘလူ၊ မတ် ၁၄/၂၀၂၀ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အစောင့်ကျ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး၊ နေအိမ်အပြန် ရိုက်နှက် ဆိုင်ကယ်လုယူခံရမှု မတ်လ ၁၁ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ သောက်ကံ ကျေးရွာနေ အလယ်တန်းပြ […]
ပြင်ဦးလွင်​ မြို့သူမြို့သား​​တွေ စိတ်ထားမွန်မြတ် လိုက်ကြတာနော် ….
ပြင်ဦးလွင်​ မြို့သား​​တွေက အဲ့လို စိတ်ထားမွန်မြတ်တာပုံပါ အကောင့်ပိုင်ရှင် ကိုဖြိုး အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဒီမောင်လေးရဲ့ အကြောင်းကို Facebook ပေါ်မတင်ဖို့ပြောထားပေမယ့် သူ့ကို လေးစားလွန်းလို့ သူ့အကြောင်း နည်းနည်းရေးမိပါတယ် သူတော်ကောင်းလေးပါ တကယ်မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိသူလေးပါ အရမ်းလေးစားမိပါတယ် မောင်လေးရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားကို နတ်လူ သာဓုခေါ်ပါစေ ကျမ ခြံဝယ်တာ […]